Maalinta: Maarso 9, 2019
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay furaysaa wadada tareenka ee Isbitaalka Magaalada. Khadkan cusub ee laga soo bilaabo Iskoolka Xaafadda Emek ilaa Isbitaalka Magaalada waa dhakhso Sultandere iyo 75. Waxaa lagu xiri doonaa xaafada sanadka. 3 waa xariiq kilomitir ah [More ...]
Imtixaanka Daaridda Khadka Tareenka ee Eminonu Alibeykoy
Gawaarida wadada tareenka Eminönü-Alibeyköy ayaa si amaan ah hoos loogu dhigay wadooyinka ay kooxdu degmadu habeenkii u waddo si tijaabooyin loogu qaado. Wadada imtixaanka ayaa dhici doonta aroortii, iyadoo laga bilaabayo deegaanka Eminonu ee ku teedsan xeebta dahabka ee Golden Horn. [More ...]
Dirinler wuxuu soo saaray Nidaam Tareen ah oo leh Nidaam Tareen
Dirinler Makina ayaa naqshaday oo beddeshay mashiinka dhulka hoostiisa ku yaal ee ku yaal sumadda cabbitaanka. Jiilaal dhulka hoostiisa maraya ayaa isu rogaya gaadhiga, 10 ayaa loo rogaa daqiiqado, kontaroolada waxaa la sameeyaa nus saac gudahood nidaamka tareenka ayaa loo xilsaaray. [More ...]
Road Ring Road Waxay Ka Baxayaan Taraafikada Magaalada
1 waxaa qoray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wadada Ordu Ring, oo daah furtay masraxa, waxay si weyn hoos ugu dhigtay culayska ka jira wadada xeebta magaalada. Kadib baaritaanno uu ku sameeyay Wadada Ordu Ring Road, wuxuu bayaan uu soo saaray saxafiyiinta. [More ...]
Halkalı Intee in le'eg ayey ku kacaysaa qiimaha tababaraha Gebze?
Istaanbuul, khadka tareenka ee magaalada, oo la filayo inuu qaado xNUMX milyan oo qof maalintii, ayaa furmaya. Jidadka khadka safka wali lama shaacin. Diyaarinta kama dambaysta ah ee tareenka rakaabka ee Istanbul, oo la filayo inuu furmo maalinta Axadda kadib sanadka 1.2, [More ...]
Turkey ayaa Bostanlı Coast ee ugu weyn
Magaalada Izmir ee Magaalo Xeebeedka Bostanli ee leh wejiga cusub ee 3 qaybta shaqada howgalka xeebaha ayaa la soo gabagabeeyey. Xaflad furitaanka midab leh ayaa dhici doonta maalinta Axadda, oo ay ku jiraan riwaayadaha iyo bandhigyada barafka lagu sameeyo [More ...]
Eurasia Tareen "Hawlaha aan looga baahnayn Eur
International Rail, Light Rail iyo Logistics Exhibition - Eurasia Rail Turkey ee hal, waa 3aad ee ugu weyn ganacsiga carwooyinka rail dunida iyo nidaamka tareenka fudud. Hoyga ilaa 200 oo qof oo soo bandhigaya iyo ku dhawaad ​​12.000 oo booqdeyaal ah [More ...]
Maanta taariikhda: 9 March March 1911 Chester Project
Maanta taariikhda 9 March Habka mashruuca 1911 Chester waxaa loo gudbiyay Golaha Baarlamaanka, laakiin waxaa la qabtay muddo dheer mana uusan dhaafin.